सभापति र महामन्त्रीमा देउवा–पौडेल समूहबाट को–को छन् उम्मेदवार ? – GALAXY
सभापति र महामन्त्रीमा देउवा–पौडेल समूहबाट को–को छन् उम्मेदवार ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन निकट आएका बेला रौनक बढेको छ ।
विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशको सभापति र महामन्त्री पदमा आकर्षण देखिएको छ । कांग्रेसका नेताहरू सभापति र महामन्त्री हत्याउन मतादाताहरूलाई फकाउनेदेखि आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन थालका छन् । सभापति र महामन्त्रीमा उम्मेदवार बन्ने सोँच बनाएका नेताहरूले भित्री रुपमा प्रचार प्रसार शुरु गरिसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीच कडा टक्कर हुनेछ । लुम्बिनीमा देउवा समूह बलियो रहेको चर्चा छ । पौडेल समूहले पनि लुम्बिनीमा आफू बलियो रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
देउवा समूहबाट सभापतिमा देवेन्द्रराज कँडेल, कृष्णकिशोर घिमिरे, राजु खनाल, अब्दुल रज्जाकसहितका नेताहरूको नाम चर्चामा छ ।
देवेन्द्रराज कँडेल मन्त्री, सांसद र केन्द्रीय सदस्य भइसकेका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा भन्दा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्ने सोँचमा छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी वा सदस्यमा उम्मेदवार जित्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने कँडेल लुम्बिनी प्रदेशको सभापतिमा आउन सक्ने चर्चा सानेपातिर छ ।
देउवा समूहबाट युवा नेता एवम् पूर्वसांसद राजु खनालको चर्चा पनि निकै छ ।
पौडेल समूहबाट सभापतिमा अमरसिंह पुन, सञ्जयकुमार गौतम, वीरबहादुर राना, सुरेन्द्र आर्चाय, मनोजमणि आचार्यको नाम चर्चामा छ । यो समूहमा अमरसिंह पुन बलियो मानिन्छन् । नेता पुन माओवादीको कथित जनयुद्धका बेला रोल्पा जिल्लामा बसेर कांग्रेसको संगठन बनाएका थिए ।
महामन्त्रीमा देउवा समूहबाट विमल ढकाल, विक्रम खनाल, राजेश आचार्यको नाम चर्चामा छ । देउवा समूहबाट विमल ढकालको चर्चा अलिक धेरै छ । पौडेल समूहबाट महामन्त्रीमा विष्णु मुस्कानको नाम चर्चामा छ ।
सभापतिमा उम्मेदवार बनेका नेताहरू पछि सहमति गर्ने क्रममा पदाधिकारीमा झर्ने सम्भावना पनि छ ।